Selling Care: Becoming Top Insurance Agent - Better Version
Selling Care: Becoming Top Insurance Agent
September 29, 2021 2021-11-26 9:56
သင်လဲ ထိပ်တန်း အာမခံ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာဖို့အတွက် အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။
ဒီသင်တန်းက ဘယ်သူတွေနဲ့ သင့်တော်လဲဆိုရင်
အာမခံလုပ်ငန်း တည်ထောင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေတဲ့လူတွေ
ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ အာမခံကိုယ်စားလှယ် လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေ
ထိပ်တန်း အာမခံ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လာဖို့အတွက် စိတ်အားထက်သန်သူတွေ
Becoming Top Insurance Agent သင်တန်းကို ဘာလို့တက်သင့်လဲ။
အာမခံ ရောင်းချခြင်းအကြောင်း မိတ်ဆက်မှာ အာမခံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာရမယ်။
အာမခံကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေမှာ ဖောက်သည်ရှာခြင်းကနေ နောက်ဆုံး ချောချောမွေ့မွေ့ဝယ်သွားတဲ့အထိ ပါပါတယ်။ ဒီအဆင့်တွေကို အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ်ကျော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ သင်ယူနိင်မယ်။
ထိပ်တန်း ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် လိုအပ်မယ့် အရည်အချင်းတွေ၊ အရည်အသွေးတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ။ သင်ကိုယ်တိုင် ထိပ်တန်း အာမခံ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာဖို့အတွက် ဘယ်လို ဖြည့်ဆည်းနိုင်မလဲ။
သင်သွားရောင်းမယ့် လူတွေက လူအမျိုးမျိုး၊ စိတ်အထွေထွေရယ်။ ဒါဆို ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့တွေ့ရင် ဘယ်လို ပုံစံ ရောင်းနိုင်မလဲ။ လူအကဲခတ်နိုင်ခြင်းက သင် ထိပ်တန်း အာမခံ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာဖို့အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။
သင်သွားရောင်းတိုင်း ဝယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ငြင်းတာမျိုးတွေ ကြုံရမယ်။ ဒီအချိန်မှာ ထားရမယ့် စိတ်နေသဘောထားနဲ့ ဝယ်ဖြစ်သွားအောင် လုပ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို လေ့လာရမယ်။
သင့်ဝယ်သူကနေ ဖောက်သည် ဖြစ်လာတဲ့အထိ ရေရှည် ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် စာရင်းပြုစုတာတွေကို စနစ်တကျ လုပ်ထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ သုံးသပ်ချက် ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်ပြီး ဗျူဟာကောင်းကောင်းချတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
သင် ထိပ်တန်း အာမခံကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်
ဒေါက်တာထွန်းနေလင်း ကို ၁၉၈၂ တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ တွင် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် မှ ဆေးပညာဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၁ အထိ Zifam Pinnacle Pty Ltd ဆေးကုမ္ပဏီတွင် Product Executive ရာထူးဖြင့် အရောင်းဝန်ထမ်းများအား Product Training ပေးခြင်း ၊ အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှ ဆရာဝန်များအား Product Presentation များပြုလုပ်၍ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ မိတ်ဆက်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး Sales နှင့် ပတ်သက်သော ပညာရပ်များကို အဆိုပါ ကုမ္ပဏီတွင် စတင်ထိတွေ့ လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၂ မှ ယနေ့အထိ Happy Holidays Travel & Tours အမည်ဖြင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကို တည်ထောင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကို ပိုမိုရရှိလာခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ မှ ယနေ့အထိ Happy Fitness Store အမည်ဖြင့် Gym အားကစားပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှတင်သွင်းရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းကိုလည်း ထပ်မံ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းမှာ ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။
တဖက်တွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသလို ၂၀၂၀ မှ စတင်၍ အာမခံလုပ်ငန်းနယ်ပယ် သို့ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် အမေရိကန်အခြေစိုက် CHUBB အာမခံကုမ္ပဏီတွင် Unit Manager အနေဖြင့်လည်းကောင်း ၊ AYA SOMPO အာမခံကုမ္ပဏီတွင် အရောင်းအေးဂျင့် အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်၍ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အာမခံအရောင်းကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
CHUBB ၏ 2020 ခုနှစ်အတွက် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရောင်းအားအကောင်းဆုံး Top No.4 Agent Award ကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပြီး ..
လက်ရှိ 2021 တွင်လည်း ကမ္ဘာ့အာမခံလောကတွင် အထင်ကရအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သော MDRT အဖွဲ့အစည်းကြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ရောင်းအားပမာဏကို ကျော်လွန်သွားပြီမို့ MDRT (Million Dollars Round Table) Member တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ ရေပန်းစားလျက်ရှိပါသည်။
Selling Care: Becoming Top Insurance Agent တက်ပြီးသင်ဘာတွေရသွားမလဲ။
1. Introduction To Insurance Markets & Selling Process
အာမခံအကြောင်း တစေ့တစောင်း နဲ့ အာမခံဈေးကွက်အကြောင်း ရယ်။ အာမခံ ရောင်းချခြင်းမှာ ဖြတ်သန်းရမယ့် အဆင့်တွေကို လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်တစ်ဆင့်စီချင်းမှာ အကောင်းဆုံးရလာဒ်ရဖို့ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်သွားရမလဲဆိုတာတွေ လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. Top Qualities and Skills To Become Top Insurance Agent
လူတိုင်းက သူပုံစံနဲ့ သူ၊ သူ့အရည်အသွေးနဲ့ သူပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်တဲ့ လူတွေကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် တူညီတဲ့အချက်တွေ၊ တူညီနေတဲ့ အရည်အသွေးတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင်ကိုယ်တိုင် ထိပ်တန်း အာမခံ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာဖို့အတွက် လိုအပ်မယ့် အရည်အသွေးတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ နဲ့ ဒီအရည်အသွေးတွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် သင်ဘာတွေ လုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာ သင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3. Types Of Customers And How To Deal With Them
သင်က ပုံစံတူ လူတွေနဲ့ဘဲ တွေ့နေရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ လူအမျိုးအစားတွေ အကြောင်းရယ်၊ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ့ရင် ဘယ်လို ရောင်းရမယ်ဆိုတာမျိုးကို နားလည်တတ်ကျွမ်းထားဖို့ လိုပါတယ်။
4. Selling Techniques
Selling Process တွေမှာ လေ့လာခဲ့တာတွေကို ပိုပြီးထိရောက်လာအောင် ရောင်းနိုင်မယ့် အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်တွေကို လေ့လာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
5. Overcoming Objections And Sales Closing Technqiues
ကြိုက်တယ်၊ မဝယ်သေးဘဲ လည်နေတာမျိုး၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ငြင်းတာမျိုးတွေ သေချာပေါက် ကြုံရမှာပါ။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေမှာ ရေရှည်အတွက်ပါ ကြည့်ပြီးတော့ ဘယ်လို ကျော်လွှားနိုင်မလဲ။ အရောင်းဖြစ်ဖို့ စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဆင့်တွေထိ ဖြစ်သွားအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေအကြောင်းကို လေ့လာသွားရမှာပါ။
ထိပ်တန်း အာမခံ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီလား။
စာအုပ် အကြောင်း အသေးစိတ် ကြည့်မယ်..
အရောင်းပိုင်းအတွက် အပြည့်စုံဆုံး စာအုပ်..